खुट्टाको औलाको आकार बाट थाहा पाउनुस् आफ्नो स्वभाव – Sandes Post
March 29, 2022 841
तपाईको औलाको आकार कस्तो छ ? कुनै औला छोटो कुनै लामो त सबैको हुन्छ तर हेर्दा कसैको मिलेका हुन्छन् त कसैको नमिलेका हुन्छन् । अब तपाईको खुट्टाको औलाको लम्बाई (आकार) बाट तपाईको स्वभावको बारेमा अन्य मानिसले सहजै थाहा पाउन सक्छन् । र यदि तपाई पनि अरु कसैको स्वभाव जान्न चाहानुहुन्छ भने अब उनीहरुको खुट्टाको औलाको आकारबाट सहजै पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ ।
तपाई कुनै पनि मानिसको नजिक हुन चाहानुहुन्छ तर उसको बानि, स्वभाव कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन चाहानु भएको छ भने अब तपाईले त्यस्ता मानिसहरुको खुट्टाको औलाको आकार हेर्नु पर्ने हुन्छ । हामी यहाँ पाँच प्रकारका औलाका आकारका बारेमा वर्णन गर्दैछौं ।
Prevखानामा अजिनोमोटोको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? ख्याल गरौँ गम्भीर समस्याको कारण बन्न सक्छ :
Nextपल शाह पोखरा पुगेपछि अब के हुन्छ ? भिडियो हेर्नुहोस्